China Weekly: ဘေးအန္တရယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ၊ ဆေးဝါးနှင့် အဆောက်အအုံဆိုင်ရာ နည်းပညာများ – Pandaily
Apr 12, 2021, 16:18ညနေ 2021/04/12 20:01:53 Pandaily
AI Risk Manager Ice Kredit Series C2 ဘီး Package ၂၂၈ သနျး
AI ၏ ဘေး အန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းမှု Provider C2 ၏ Wheel Financing C2 Series ပြီးစီးကြောင်း တရားဝင်ကြေ ညာချက်၌ Radi က ယွမ်ငွေ ၂၂၈ သန်း တန်ကြေးရှိ သည်။နိုငျငံတျောအကွီးအကဲ ဗိုလျခြုပျကွီးစီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ အရှေ့တိုင်းဓနမြို့တော်၊ မဟာမိတ်မြို့တော်တွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
Ice Ryadi ဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ နှဈကုနျပိုငျးက C1 ဘီးတပျ ရနျပုံငှရှောဖှရေေးမှာ ရငျးနှီးမွှပျနှံခဲ့တယျလို့ ၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈမှာ ကွညောခဲ့ပါတယျ။ ဒီနေ့ ကြေညာလိုက်တဲ့ C2 Wheel Series Financing ဟာ ကုမ္ပဏီတခုလုံးအတွက် C-Wheel Series ရန်ပုံငွေအတွက် ကွင်းဆင်း ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ရရှိလာတဲ့အကြိုးအမွတျတှကေို ရခေဲတောငျတိုးခြဲ့ရာမှာ အဓိကအသုံးပွုမှာဖွဈပွီး Radi ရဲ့ Research and Research Team က လာရောကျရငျးနှီးမွှပျနှံမှုအပွငျ ပိုမိုရရှိမှာဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။
Ice Kredit ကို ၂၀၁၅ ခုနှဈက စတငျတညျထောငျခဲ့တာဖွဈပွီး ဉာဏျရညျတုနညျးပညာကို အသုံးပွုကာ လုပျငနျးအဆငျ့ဆငျ့ကို ဝနျဆောငျမှုပေးနတေဲ့ ကုမ်ပဏီတဈခုဖွဈပွီး စှနျ့ဦးတီထှငျမှုနယျပယျမှာ အဓိကအားထားရပါတယျ။
ကင်ဆာကုသဆေးပြုစုသူ Innolake Biopharm သည် ယခင်စာရင်းဝင် ငွေကြေး ၄၆ ဒသမ ၄ သန်း
တရုတ်နိုင်ငံမှာ ကင်ဆာနဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ် ချို့ယွင်းတာတွေကို အဓိကထားကုသတဲ့ Innolake Bioppharm သုတေသနကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး စုစုပေါင်းငွေကြေး ၄၆ သန်းကျော်ကို A Wheel Pre-Financing ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ သညျအစီအစဉျက ကုမ်မဏီတှအေတှကျ အကြိုးအမွတျတှကေို သုတသေနလုပျငနျးတှအေတှကျ အရှိနျအဟုနျမွှငျ့လုပျဆောငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီဘီးယား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာ ပါဝင်သူတွေဟာ တရုတ်အခြေစိုက် Alternative Investment Corporation Dinghui Investment, Medical Technology Platform Dink Bio Industries Investment Fund၊ Hangzhou Hua Vianghong Silver Investment အပြင် Private Expo ကုမ္ပဏီတို့ ဖြစ်ပါတယ်။
Innolake နဲ့ ပတျသကျပွီး Biopharm
Biopharma Innolake သည် ကင်ဆာကုသမှုနှင့် ကိုယ်ခံအားချို့ယွင်းမှုဆိုင်ရာ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အဖြေများကို ဖော်ထုတ်ရန်အတွက် Chaboming and Chen ကို ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် စတင်ထူထောင်ခဲ့ပြီး Chamming Deep ကို အမေရိကန်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်သူ Johnson Seng (Johnson & Johnson) က ၂၁ နှစ်ကြာ တည်ထောင်ခဲ့ကာ Chen သည် ဟောင်ကောင်မှ ဇီဝဆေးဝါးကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် JHBP Holdings ကို စတင်တည်ထောင်သူ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် စာရင်းဝင်ခဲ့သည်။
C Ventures နှငျ့ BAI Link RosbotticPlus. Wai သနျး ၂၀
ရှနျဟိုငျးအခွစေိုကျ Intelligence Building Solutions Provider RoboticPlus. Wai က ဗုဒ်ဓဟူးနကေ့ကွညောခဲ့ပွီး B-wheel Financing ပွီးဆုံးပါက စုစုပေါငျးဒျေါလာ သနျး ၂၀ ရရှိမှာ ဖွဈပါတယျ။
ယခုနောက်ဆုံး Bonus နှင့် C Ventures တို့ ပူးတွဲဦးဆောင်သော ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုသည် ဟောင်ကောင်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် လက်လီလုပ်ငန်း လုပ်ငန်းရှင် Jung Lu Young ၏ Windsons ကုမ္ပဏီပင် ဖြစ်သည်။ ယခင်က ရင်းနှီးမြှုပ် နှံမှုများတွင် ပါဝင်ခဲ့ သည့် ပါတီများကလည်း Pully Capital and Line ကို ထည့်သွင်းမဲပေးခဲ့ သည်။
Topics: မွငျကှငျးTencent ဟာ ခွေးတစ်ကောင်ကို လေးခွနဲ့နင်းပြီး ပြေးခုန်နိုင်ပြီး လေထဲပြန်လှည့်နိုင်ပါတယ်
RoboticPlus. Iai က ယခုအစီအစဉ်အတွက် ရန်ပုံငွေ ထပ်မံကောက်ခံပြီး သုတေသနပြုခြင်း၊ အဆောက်အအုံများကို အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ ဆော့ဖ်ဝဲနှင့် Core Robotics နည်းပညာများအပြင် ၎င်း၏ Cloud Supply Chain စနစ်ကိုလည်း တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။
RoboticPlus နှငျ့ စပျလဉျြး၍ ai
RoboticPlus ကို ၂၀၁၆ ခုနှဈက စတငျတညျထောငျခဲ့ပွီး Wai က ဆောကျလုပျရေး လုပျငနျးအတှကျ အာရုံစူးစိုကျကာ အသိဉာဏျရှိသော စကျရုပျပစ်စညျးမြားနှငျ့ နညျးပညာဆိုငျရာ ဆောကျလုပျရေး လုပျငနျးမြားအတှကျ ပေးပို့သော အပလီကေးရှငျးတခု ဖွဈသညျ။ ဒီလိုလုပ်တာတွေကို ရည်ရွယ်ပြီးတော့ လုပ်လာရင်တော့ ဖြေရှင်းနည်းကို အသုံးပြုပြီးတော့ တည်ဆောက်လာတဲ့ ရိုးရာဓလေ့ကို ဖော်ဆောင်ပြီးတော့ ပြန်လည်ပြီးတော့ လက်လုပ် တည်ဆောက်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဆောင်ရွက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖုနျကွားရှငျက ကမ်ဘာ့ပထမဆုံး လူရှေးစကျကို စီးနငျးနိုငျခဲ့တဲ့ Smart Ma
ဒွပျစငျဝတ်ထုတှဟော တဖွညျးဖွညျးနဲ့ လကျတှဖွေ့ဈလာပုံရပါတယျ။ Peng Motor ဟာ Peng Star Smart ကုမဏီက အင်ျဂါနကေ့ ထုတျပွနျတဲ့ ကမ်ဘာ့ပထမဆုံး Smart Machine ဖွဈပါတယျ။